कोरोनापछि कस्ता समस्या देखिँदा ज्यानै जान सक्छ ? र, बच्न गर्नुपर्छ ?: विशेषज्ञले दिए यस्ता सुझाव « Clickmandu
कोरोनापछि कस्ता समस्या देखिँदा ज्यानै जान सक्छ ? र, बच्न गर्नुपर्छ ?: विशेषज्ञले दिए यस्ता सुझाव
प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १४:०६
यस्तै, जसलाई थोरै हिँड्दा नै स्वाँ-स्वाँ हुन्छ, त्यस्ताको समेत हार्ट फेलियर हुने समस्या देखिएको छ । कतिपयलाई क्षारे रोगको जस्तो लक्षण तथा समस्या पनि देखिनसक्छ ।
विभिन्न अस्पतालहरुले कोभिडपछि हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ‘पोस्ट कोभिड क्लिनकि’ सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै आएका छन् । त्यहाँ आएर समेत सेवा लिन सकिन्छ ।
पोस्टकोभिड क्लिनिकमा आउने बिरामीहरुको छातिको सिटी स्क्यान वा एक्स-रे गरेर फोक्सो वा संभावित निमोनियाको अवस्था हेर्ने काम गरिने डा. जैसवाल बताउँछन् । त्यस्ता बिरामीहरुको शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता कति छ भन्ने कुरा समेत एन्टीबडी जाँचबाट हेरिन्छ ।
रगत बाक्लो भएको छ कि छैन भन्नेजस्ता समस्या समेत विशेष जाँचबाट हेरिन्छ । यस्तै, हेमाटोलोजी प्रोफाइल, सीआरपीलगायतका जाँच पनि गरिन्छ ।
डा. जैसवाल भन्छन्-‘पोस्ट कोभिडपछि देखिने समस्याहरुको बेवास्ता नगर्नुहोस् । यसले ज्यानै जानसक्छ । समयमै अस्पताल आएर विज्ञले सुझाएको जाँच गरी परामर्शका आधारमा औषधि लिन थाले ज्यान जोगिनसक्छ ।’